Ipharadesi ebhishi labantu ababili
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Flor
Ibhishi laseGorgona liyipharadesi ongalithola, elinesihlabathi esimhlophe namanzi afudumele asuka oLwandlekazi iPacific. I-Gorgona iyindawo yokudoba ngakho-ke ungakwazi ukuhamba imizuzu engu-15 futhi uthenge izinhlanzi ezisanda kufika! Futhi e-Gorgona, kukhona igrosa encane nezindawo zokudlela ezithile. I-condo inakho konke okudingayo ukuze uhlale kahle. I-wifi iyashesha, futhi ungasebenza ngokubuka okuhle kakhulu ongake wakucabanga! Ungakhohlwa ilungu lakho le-Amazon Prime noma le-Netflix ukuze ujabulele ukubuka amamuvi amnandi usofa, kanye nendawo engasebhishi ngokuphelele!
I-Ph Playa Serena ingaphambi kolwandle ngokuphelele, futhi ifulethi lisezingeni lolwandle, linombono ohlukile! Ifulethi linekhabethe lokuhamba futhi livulekile kubantu ababili, lilungile! Kukhona iwasha nokomisa. I-condo yinhle kakhulu, abantu banobungane kakhulu futhi bavame ukuza ukuzochitha ubusika besuka enyakatho nenkabazwe. I-wifi TV iyashesha, ungasebenza futhi ubukele amamuvi kodwa khumbula ukuletha iphasiwedi yakho ukuze ufinyelele ku-Netflix noma ku-Amazon prime ngoba asinawo amashaneli we-tv. Kukhona indawo yokosa inyama, idamu lokubhukuda, ijimu, imidlalo kanye nendawo yokufunda. Imizuzu eyi-10 kuphela usuka eCoronado lapho ungathola khona izitolo ezinkulu, amabhange nakho konke okudingayo ukuze uphile kamnandi ogwini lolwandle. Indawo yokupaka iyatholakala, kodwa isibhakabhaka esivulekile kodwa ngaphakathi kwesakhiwo.
4.75 ·16 okushiwo abanye
I-Gorgona iyidolobha elihle kakhulu, elijwayelekile kakhulu. Kuthule nje ngokujwayelekile kodwa ngamaholidi athile ulwandle lungagcwala futhi lube nomsindo
Angihlali e-condo, kodwa ngihlala eduze. Ngihlale ngilungele ukusiza isivakashi sami ukuthi sibe nokuhlala okungcono kakhulu ngangokunokwenzeka futhi singathandana nePanama